Interior Designer कसरी बन्ने ? योग्यता, करियर क्षेत्र, तलब
हरेक व्यक्तिले आफ्नो घरलाई आफ्नो मनपसन्दले सजाउन चाहनछन् । के तपाइलाई घर सजाउन राम्रो लाग्छ वा Designing मा रुचि छ । यदि हा भन्नु हुन्छ, भने आज मैले बताउछु, कि Interior Designer कसरी बन्ने ? Interior Design भनेको के हो ? Interior Designer को काम के हो ? यसको लागी योग्यता, स्किल्स र एउटा इन्टेरीयर डिजैनर को सैलारी आदि । यदी तपाई पनि Interior Designer बन्न चाहनु हुन्छ भने यो लेख अन्त्य सम्म पढ्नुहोला । यो लेखमा Interior Designer बन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएको छ ।
Interior Designer त्यस्तो विद्यार्थी बन्न सक्छन, जो Designing मा रुचि राख्छन । यदी तपाइलाई कुनै ठाउँ सजाउने मन पर्छ भने तपाई Interior Design मा आफ्नो करियर बनाउन सक्नु हुन्छ । धेरै मान्छेहरुले आफ्नो घरलाई सुन्दर बनाउन Design बनवाउ छन् । र बिभिन्न प्रकार को Designer लाई Hire गर्छन । केहि मान्छेहरु Interior Design को लागि पागल हुन्छ । यो Article मा मैले तपाइलाई Interior Designer कसरी बन्ने ? भन्ने बारेमा विस्तार मा बताएको छु ।
इंटीरियर डिजाइनिंग के हो ? What is Interior Design in nepali
इंटीरियर डिजाइनिंग भनेको के हो, यसका कार्यहरु, इंटीरियर डिजाइनिंग के हो, What is interior designing in nepali, What is interior designer in nepali.
हरेक मान्छेले चाहनछन्, उनीहरुको घर बाहिर बाट जति राम्रो हेरिन्छ, त्यति नै सुन्दर भित्र बाट पनि दिखोस । कुनै घर, इमारत वा भवन को आन्तरिक अस्थानलाई सजाउने र सुन्दर बनाउने कामलाई Interior Designing भनिन्छ ।
कुनै जग्गा वा घर को Interior Design को आकर्षक बनाउनु, सामानलाई व्यस्तित गर्नु, कुनै पनि ठाउँलाई सुन्दर तरिकाले सजाउनुलाई Interior Designing भनिन्छ । घर भित्र रहेको हरेक वस्तु, रंग, फर्निचर को सजावटलाई Interior Designing भनिन्छ । र जुन व्यक्तिले यो सबै ठाउँलाई सजाउने काम गर्छ त्यसलाई Interior Designer भनिन्छ।
Interior Designer कसरी बन्ने ? How o become Interior Designer
यदि तपाई Interior Designer बन्न चाहनु हुन्छ, भने तपाइलाई Interior Designing Course गर्नु पर्छ। Interior Designing Course गर्नु को लागि तपाइलाई कक्षा १२ उतीर्ण भएको हुनुपर्छ । तपाई जुनसुकै विषयमा १२th उतीर्ण गर्नु पर्छ । १२औ उतीर्ण गरेको विद्यार्थीले मात्र Interior Designing को लागि Apply गर्न सक्छन ।
यदि तपाई कक्षा १२ उतीर्ण गर्नु भएछ,भने Interior Designing मा डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स वा सर्टिफिकेट कोर्स गर्न सक्नु हुन्छ । तपाई Graduation पछि पनि Interior Designing गर्न सक्नु हुन्छ। Interior Designing कोर्स गरेपछि तपाई Room Designing, Kitchen Designing, Office Designing आदि मा विशेषज्ञ बन्न सक्नु हुन्छ । Interior Designing Course फिल्ड अनुसार फरक फरक हुन्छ ।
यदि तपाई Interior Designing Course गर्न चाहनु हुन्छ। भने तपाइलाई आफ्नो कोर्स को Syllabus थाहा हुन् पर्छ। यहाँ मैले तपाइलाई Interior Designing Course Syllabus बताउदै छु जसबाट तपाइलाई थाहा भइहाल्छ। कि यस अन्तर्गत कुन कुन विषय पढ्नु पर्छ।
Services Professional Management- Estimating and Budgeting
Display Computer Aided Designing
यो कोर्स गरे पछि तपाई Designing को क्षेत्रमा Expert बन्नु हुन्छ। यसपछि सजावट गर्नुमा माहिर बनिहल्नु हुन्छ। जसले गर्दा तपाई कुनै कम्पनि मा Decorator को नोकरी पाउन सक्नु हुन्छ। तपाइले चाहनु हुन्छ। भने सुरुवात मा कुनै कम्पनीको साथमा मिलेर काम गर्न सक्नु हुन्छ। यस्तो गर्नले तपाईको अनुभव र जानकारी बढ्दै जान्छ, फेरी तपाई पछि गएर Designing को क्षेत्रमा आफ्नो कम्पनी खोल्न सक्नु हुन्छ। यदि तपाई Creativity र Technology मा सक्षम हुनुहुन्छ। भने तपाई यो क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नु हुन्छ।
Interior Designer को तलब ( Salary of Interior Designer in nepali )
Interior Designer को तलब उनिहरुको काम माथि निर्भर गर्छ। जति राम्रो काम गर्नु हुन्छ, त्यति राम्रो तलब पाउनु हुन्छ। अर्थात् धेरै जसो Interior Designer को तलब फिक्स हुदैन। तर सुरुवातमा Interior Designer को तलब १० हजार देखि २५ हजार हुन् सक्छ । यसको अलावा यिनीहरु को काम र ज्ञान अनुसार तलब बढ्न पनि सक्छ ।
यदि यो जानकारी तपाइको मदत गरेछ, भने आफ्नो साथी भाई संग अवास्य नै साझा गर्नु होला ।धन्यवाद।।
#interiordesigning #interiordesign #homedecor #officedesign #kitchendesigner #homedesignerinnepal #lovelumbini #ilovelumbini
One thought on “Interior Designer कसरी बन्ने ? योग्यता, करियर क्षेत्र, तलब । How To Become Interior Designer In Nepali”
Pingback: Top 10 Beautiful Exterior Design Ideas For Nepali People
ShareTweetSharePin0 Sharesप्रदेश न.५ को स्थायी राजधानी बुटवल नै हुनुपर्छ। दाङ का साथीहरु दुईमत हुनुहुदैन र हामी सबैलाइ बिश्वास छ बुटवल मै बन्ने छ,समग्र प्रदेश को लागी दाङ र बुटवल महत्वपुर्ण शहर हुन् । दुई शहर को सम्बन्ध मा कसैले फाटो नहालौँ , बिश्व शान्ती को अग्रदुत भगवान बुद्ध जन्मेको लुम्बिनीलाई […]